Guddoomiyaha cuntada, Sofa, Miiska cuntada, Guddoomiyaha caaga, Pu Guddoomiyaha - Forman
Tianjin Forman Furniture waa warshad horseed u ah waqooyiga Shiinaha oo la aasaasay sanadkii 1988 inta badanna bixisa kuraasta cuntada iyo miisaska.
Qeybinta suuqa waa 40% Yurub, 30% USA, 15% Koonfurta Ameerika, 10% Aasiya, 5% wadamada kale.
Forman wuxuu leeyahay koox weyn oo iibin leh in kabadan 10 xirfadlayaal iibiyeyaal ah, oo isku daraya habka iibka ee khadka tooska ah iyo kan khadka tooska ah, iyo had iyo jeer muujinta ..
Kursiga caruurta 1720-caruur #
Naqshadeynta ayaa ah nafta kursiga caaga ah. Kursigu wuxuu ka samaysan yahay alaabada asalka u ah deegaanka u roon polypropylene-ka. Kursigan ayaa sida caadiga ah lagu isticmaalaa gudaha, sidoo kale wuxuu noqon karaa mid banaanka loo isticmaali karo iyadoo la adeegsanayo unti-UV qalabkiisa iyo daahan budada banaanka ah. Maaddaama dabacsanaan ay tahay muuqaalka caagagga PP, waxaad ku arki doontaa inay aad ugu habboon tahay inaad fariisato.
Kursiga caruurta 1719-Carruurta #
Kursiga cuntada waxaa lagu waxyooday dhulka laftiisa, kursigan la midka ah laanta wuxuu ku darayaa cunsur deganaan casri ah meel kasta. Kursigeeda adag ee balaastigga ah ee balaastigga ah wuxuu ka kooban yahay naqshad goyn bamboo ah hawo qabow oo casri ah, kuna habboon jikada, xafiiska, ama barxadda.
Kursiga caruurta 1619-caruur #
Kursiga waxaa laga soo farsameeyay bir iyo alwaax, jirkiisa iyo lammaanehiisa lugaha xagasha leh oo ay ku xiran yihiin mashiinno isku dhafan oo leh lugaha wareega. Kursiga baaldiga balaastigga ah dhammaantood isku xira, oo muujinaya midab adag. Kursiga gacantu wuxuu ka samaysan yahay alaabada asalka u fiican ee polypropylene-ka ee lagu daboolay dharka. Maaddaama dabacsanaan ay tahay muuqaalka caagagga PP, waxaad ku arki doontaa inay aad ugu habboon tahay inaad fariisato.
Kuraasta Kid, Kursiga Yar 1618-kids #
Khadka casriga ah wuxuu ku darayaa rafcaan casri ah cunuggaaga meesha uu ku nool yahay.Ergonomic kursiga wuxuu leeyahay naqshad gadaal qaloocsan oo loogu talagalay raaxada ugu wanaagsan. Kursiga waxaa laga sameeyay asalka asalka u ah deegaanka polypropylene-ku habboon iyo lugaha oo ka sameysan jir alwaax adag Maaddaama dabacsanaan ay tahay muuqaalka Caag PP ah, waxaad ka heli doontaa mid aad ugu habboon in la fariisto.
Miiska cuntada T-55 #
Miiskan cuntada ayaa ah shey ururiyaha oo adeegsanaya adeegsiyo badan oo laga heli karo deegaanno kala duwan, ha ahaato guriga ama xafiiska, xitaa banaanka. Waxay bixisaa aag aad u fara badan oo loogu talagalay waqtiga kafeega iyo waqtiga shaaha, akhriska galabtii, shaqeynta, soo bandhigida dheriiga aad ugu jeceshahay iyo dhirta, iyo dhinac dhigista kontoroolkaaga fog.
muraayad dusha dusha sare dusha dhagaxa diga d ...
Miiska marmarka ayaa la jaan qaada qoysaska yaryar maxaa yeelay waxay awoodaan inay iska caabiyaan amarka wax ku oolka ah, oo aan si fudud wasakh ugu soo gaadhin biyona u burburin karin miiska sida alwaaxda. Miiska miiska cunista barafka waa u fududahay qaab dhismeedka muraayadda dhagaxa ah iyadoo howsha lagu guda jiro, miiska waa la safeeyey waxaana loo isticmaalay in lagu daboolo shaqada ka hortagga wasakheynta, nadiifinta si ka dhakhso badan sidii hore. Miiska ugu xariifsan waa miiska loogu talagalay shaqooyin badan, oo noqon kara miis, miis shaah ama miis, Si loo keeno faa'iido ...
Miiska cuntada T-15
Miis wareegsan oo dusha sare ah oo si gaar ah loogu talagalay qoysaska yaryar ayaa gurigaaga siin doona muuqaal caadi ah. Tani waxay si fudud u sameysay miiska cuntada inuu cabiro ilaa afar-qof cabirkiisa yar laakiin taasi waa waxa ka dhigaya mid gaar ah oo indho-qabad dhab ah. Miiska miiska dushiisa ayaa dadka u soo dhoweeya ee ha moogaanin fursad aad ku qaadatid waqtiyada ugu quruxda badan qoyska ama saaxiibbada. Lagu sameeyay MDF waarta iyo lugaha birta ah ee iskutallaabta leh oo gashaday mid kasta hoostiisa si looga ilaaliyo sagxaddaada xoqitaanka, waxaa laga yaabaa inaad hesho ...
Miiska cuntada T-15L
T-15L: Xeerarka ilaalinta geesaha ee badbaadada, Qalabka miisaanka waara ee MDF, naqshad qurux badan.
Kursi caag ah 1666-caruur #
Naqshadeynta ayaa ah nafta kursiga caaga ah. Kursigu wuxuu ka samaysan yahay alaabada asalka u fiican ee polypropylene-ka, jir lugta birta ah waxay noqon kartaa budo la dahaadhay ama xaabo la wareejiyay Kursigan ayaa sida caadiga ah lagu isticmaalaa gudaha, sidoo kale wuxuu noqon karaa mid banaanka loo isticmaali karo iyadoo la adeegsanayo unti-UV qalabkiisa iyo daahan budada banaanka ah. Maaddaama dabacsanaan ay tahay muuqaalka caagagga PP, waxaad ku arki doontaa inay aad ugu habboon tahay inaad fariisato.
Guddoomiyaha caaga - F803 #
Kursi raaxo leh iyo saldhig adag ayaa ka dhigaya kursi gacmeedkan balaastigga ah mid lagu qurxiyo qolka cuntada, qolka fadhiga, ama jikada. Kursiga hooseeya wuxuu bixiyaa taageero badan iyada oo loo maro qoloftiisa qoto dheer iyo silsiladaha gacmaha ee sare. Lugaha ayaa fidsan si ay u sameeyaan saldhig ballaaran, hagaajinta xasiloonida kursiga iyo abuurista isu dheelitirnaan, muuqaal isu eg.
Kursi caag ah-BV #
Sida kursigan balaastigga ah, dhammaan qaab dhismeedka KD waa barta iftiinka, xirmo aad u yar oo ku habboon iibka khadka tooska ah. Kursigu wuxuu ka samaysan yahay dhammaan waxyaabaha polypropylene-ka asalka u ah asalka, oo asalkiisu yahay, naqshad qurux badan, oo aan tagi karin fursado aan la dareemi karin oo midabbo leh tixraacaaga.
Guddoomiyaha Bar caaga- 1780 #
Naqshadeynta ayaa ah nafta kursiga caaga ah. Kursiga baarku wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo buuxa oo dabiici-u-saaxiibtinimo leh oo polypropylene ah. Ikhtiyaarro midab leh xulashooyinkaaga. Kursigan baarku caadi ahaan waa adeegsiga gudaha, sidoo kale banaanka ayaa loo isticmaali karaa. Maaddaama dabacsanaan ay tahay muuqaalka caagagga PP, waxaad ku arki doontaa inay aad ugu habboon tahay inaad fariisato.
Fadlan naga tag oo waxaan la xiriiri doonnaa 24 saac gudahood.
Guddoomiyaha caaga 1681 #
Naqshadeynta ayaa ah nafta kursiga caaga ah. Sii kursi casri ah xaflad ama dhacdo caadi ah kuraasidan gacmaha lagu fadhiisto. Waxay ku habboon tahay in wax lagu cuno gudaha ama dibedda lagu isticmaalo, kuraastaasi si fudud ayaa loogu kaydiyaa kaydinta degdegga ah iyo gaadiidka. Kursigu wuxuu ka samaysan yahay alaabada asalka u fiican ee polypropylene-ka, jir lugta birta ah waxay noqon kartaa budo la dahaadhay ama xaabo la wareejiyay Ikhtiyaarro midab leh xulashooyinkaaga. Kursigan ayaa sida caadiga ah lagu isticmaalo gudaha, sidoo kale wuxuu noqon karaa mid banaanka lagu isticmaalo oo leh walxaha unti-UV-ga ah iyo dahaadhka budada banaanka ....
Sofa F813 #
Forman waa warshad horseed ah oo had iyo jeer diiradda saarta naqshadaha asalka ah. Si aad ah ugu talinaynaa gogosha fadhiga, waa wax aad u fiican in lagu fariisto ama lagu seexdo barkinta jilicsan. Isku dar ah barkinta iyo balaastigga PP, waxay ka buuxsameysaa dareenka moodada oo xoog ku filan si ay u taageerto ugu yaraan 150kgs load. Waxaad ku ridi kartaa qolkaaga fadhiga si aad ugu raaxaysato noloshaada cajiibka ah! midab kasta ayaa la heli karaa, oo sugaya baaritaankaaga!
Kuraasta cuntada caaga Shelly #
Naqshadeynta ayaa ah nafta kursiga caaga ah. Maaddaama dabacsanaan ay tahay muuqaalka caagagga PP, waxaad ku arki doontaa inay aad ugu habboon tahay inaad fadhiisato. Waa kursi dhinac madadaalo oo casri ah oo ku bogaadiyey meelaha cuntada lagu cuno ee gudaha iyo dibaddaba. Loogu talagalay qaab bilaash ah oo bilaash ah, wuxuu isku daraa astaamaha aasaasiga ah ee naqshadeynta casriga ah oo leh kursi deeqsinimo leh oo qaab istiraatiijiyad leh loogu talagalay dib u habeyn wanaagsan. waa mid si buuxda loo adkeyn karo, wuxuu u imanayaa si buuxda la isugu keenay, waxaana lagu dhejiyay wax aan m ...
helitaanka jumlada Multi-boos helitaanka caag ...
Waxaan nahay soo saare khibrad leh. Ku guuleysiga inta badan shahaadooyinka muhiimka ah ee suuqyadeeda Warshaddu waxay si toos ah u siisaa Xaaladda Guddoomiyaha Shiinaha ...
Makhaayadaha Denver waxay hal abuur ku yeeshaan di ...
Shirkad caan ah oo naqshadeysa qalabka guryaha
Isticmaalka bamboo waa hab fiican oo lagu qurxiyo gurigaaga
Maanta waxaa jira siyaabo badan oo lagu qurxiyo guri leh alaab qalaad oo loogu talagalay naqshad gaar ah. Haddii aad doorbideyso qurxinta Aasiya ama Reer Galbeedka, waxaa laga yaabaa inaad dhex gasho ...
TALADA LACAG LA'AAN 0086-18630605237
CINWAAN Shengfang Town, Bazhou City, Gobolka Hebei, Shiinaha